Daawo:- Eng.Yariisoow “Somalia lama mid ahan Dalalka Ciraaq iyo Afghanistan” Hadal dad badan kayaabiyay.
April 15, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta 2
Dhinaca kale Waxa uu kahadlay raqiga udhaxeeya Somalia iyo dalalka carbeed ee ay ka aasaasmeeyn ururada Argagaxisa isagoona Sheegay Somalia in aysan lamid ah Dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.
war ninkani wanaagsanaa oo Ilaahay ha garab galo, waayo waa daacad xaq ku shaqaynayaa wax xunna aan dadkiisa la jeclayn.
Mudane Yariisoow Cabdriraxmaan guulayso Ilaahay idankiis.
Yariisoow iyo Mulongo ayaa waxaa ay isku af garteen in:
“la sameeyo GUDDI farsamo oo ka socda labada dhinac, kuwaasoo ka wada shaqaynaya qorshaha Amniga Caasimadda”.
Waa af carabi aynu macnaha ku duugan aadka u dhaadsannahay. Goob ay Yariisoow iyo Mulongo u heshiiyeen Alle ha u naxariisto.
War illayn dawaco meel ay macal uga baratay maara looga ma helo!
Qolyooyinkan Koonfureed maxaa damiirka ka dilay oo ay musuq maasuqan baahsan ee qaran dummiska ah caadada uga dhigteen toloow? Maxaa ka madoobeeyay in haddii ay dalkooda xasilistaan oo ay daacad u noqdaan malaayiin ka badan oo xalaal ah ay kaga macaashi lahaayeen?
DAAWO VIDEO:DEG DEG MD Puntland oo Bahdiley Jubaland ,Galmudug Shirka Nairobi Qaran Dumis Ahaa Diideyna Inuu Ka Qeyb Galo.
Shirwayne Muhiim u ah beesha Warsangeli oo ka furmaya Badhan + Masuuliyiin muhiim oo ka qayb galaya.
DAAWO:- MD Xaaf oo markale sheegay in DFS ay hortaagatan inuu booqday hooy uu ku leeyihiin Muqdisho.